अनौँठो फूल, प्रत्येक वर्ष १ वैशाखमा मात्र फुल्छ ! - Abhiyan news
अनौँठो फूल, प्रत्येक वर्ष १ वैशाखमा मात्र फुल्छ !
१ बैशाख २०७९, बिहीबार ०३:०३ अभियान न्यूजLeaveaComment on अनौँठो फूल, प्रत्येक वर्ष १ वैशाखमा मात्र फुल्छ !
चमत्कारी फूल वैशाख १ गतेका दिन बिहानीपख फुल्नु र साँझपख ओइलाएर जानु आफैँमा एउटा आश्चर्य र कौतुहलको विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पूजनसय रहेको वीरगाथाका वीर पुरुष सलहेशको जीवन गाथासँग जोडिएको त्यो फूल फुल्ने रूख के को हो । प्रश्न वनस्पतिविद्का लागि अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
आजदेखि बाग्मती प्रदेशमा सार्वजनिक बसको भाडा बढ्यो
२० भाद्र २०७८, आईतवार ११:२९ अभियान न्यूज
एमालेको वडा अधिवेशन शनिबारबाट सुरु हुने
१ कार्तिक २०७८, सोमबार ०३:३२ अभियान न्यूज
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार ०३:३३ अभियान न्यूज